XOG CULUS-Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Isku Shaandhayn Samaynaya iyo Rag Badan oo Xilalka Wayn Doona.
Puntlandnews.net (Nairobi)-Warar xogagaal ah oo caawa warbaahinta Puntlandnews ay ka helayso qasriga madaxtooyada ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni uu isku shaandhayn samayn doono.
Xogta ay heshay Puntlandnews ayaa sheegaysa in madaxweynuhu uu isku shaandhayn ku samayn doono inta badan agaasimayaasha wasaaradaha iyo hayaddaha dowliga ah ee Puntland halka kuwa kalena xilka wayn doonaan.
Wararku waxa ay sheegayaan in xubno badan oo kamid ah agaasimayaasha hadda jooga ay xilalka u wayn doonaan sababo la xiriira saami qaybsiga xukuumadda kadib markii beelohoodu ka soo dhex muuqdeen dhanka wasiirada oo qaar ayba xigto yihiin wasiirada cusub qaybtood waxaana lafilayaa inay ka soo dhex muuqdaan dhalinyaro badan.
Kadib magacaabistii golaha xukuumadda madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni wuxuu magacaabay agaasinka cusub iyo taliska ciidamada madaxtooyada Puntland, waxaana weli la sugayaa qaabka ay noqon doonaan gaasimayaasha wasaaradaha iyo hayadaha dowladdu.
Ma ahan wax cusub in madaxweyne uu soo magacaabo agaasimayaal, taliyayaal iyo goboratoorayaal cusub marka uu soo dhiso xukuumaddiisa maadaama mararka qaar dhacdo inaysan isku siyaasad ahayn xubnahaan oo dhammaan ka hara xukuumaddii tiisa ka horreysey.